Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Australia » Agbanyela ụlọ oriri na ọṅụṅụ kwarantaini COVID-19 na Australia
Akụkọ na -agbasa Australia • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ndị uwe ojii nwụchiri otu nwanyị dị afọ 31, onye kọrọ na ọ gbara ọkụ n'okpuru ihe ndina ya, gbanyere ụlọ oriri na nkwari akụ ebe enyere ya na ụmụ ya abụọ iwu iche iche maka ụbọchị iri na anọ.
Nnukwu ọkụ gbara n'elu ụlọ nkwari akụ Pacific dị n'obodo Cairns na ugwu ọwụwa anyanwụ Australia, na-amanye ịchụpụ ndị ọbịa ụlọ oriri na ọṅụṅụ karịrị 160.
E boro nwanyị ahụ ebubo ịgba ọkụ site na Queensland ọchịchị.
Enweghị mmerụ ahụ, mana mmebi nke ụlọ ahụ 'dị mkpa' ma manye ndị ọchịchị ịkwaga ndị mmadụ n'ụlọ ọrụ iche iche COVID-19.
Ndị ọchịchị kwuru na otu nwanyị mụnyere ọkụ ka ọ nọrọ naanị “ụbọchị ole na ole” nke mmachibido iwu izu abụọ n'ime ụlọ nkwari akụ mgbe ọ gafechara Queensland site na steeti ọzọ.
Tupu ihe a mere, a kọkwara na ọ kpataara ndị ọrụ ahụ nsogbu ndị ọzọ a na-akọwaghị n'oge ọ nọ.
Akpọrọ ụmụ ya abụọ n'okpuru nchekwa ndị uwe ojii, ebe nwanyị a boro ebubo ịgba ọkụ na ụma mebie ya, ma ga-apụta n'ụlọ ikpe taa.
N'ime oge nke ọrịa COVID-19, Australia edekọla ihe dị ka ọnwụ 2,000 ka ọ na-amalite na ụfọdụ mkpọchi ụwa na mgbochi iche, na-emetụta ọ bụghị naanị njem mba ụwa kamakwa njem n'etiti steeti, iji mee ka ọrịa na-efe efe dị obere ka o kwere mee ruo mgbe a gbara ọtụtụ ndị mmadụ ọgwụ mgbochi.
Dịka mba ahụ mechara akwado imeghe ndị njem nwere nka na ụmụ akwụkwọ ókèala ya na Disemba 1, achọpụtara ikpe mbụ nke ụdị Omicron coronavirus ọhụrụ na ndị njem si South Africa, nwere ike imebi atụmatụ ahụ.